व्यक्तिलाई पार्टी र पार्टीलाई गुट भन्न शरम मान्नु पर्दैन ? - Dainik Nepal
बुधबार, ८ वैशाख २०७८
व्यक्तिलाई पार्टी र पार्टीलाई गुट भन्न शरम मान्नु पर्दैन ?
निर्मल भट्टराई २०७७ चैत १८ गते ९:४१
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अचम्मका दृश्य देखिदैछन् । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले सात दशक पार गरिसक्दा पनि यसको नेतृत्व गर्ने केही नेताहरुमा पटक्कै परिपक्वता देखिएन । मौका पर्यो भने अहिलेसम्म भएका परिवर्तनको श्रेय आफैं लिन पनि पछि नपर्ने तर पदीय स्वार्थको पट्टी आँखामा बाँधेपछि सबै कुरा विर्सने रोग उनीहरुमा कायमै रहेको देख्न सकिन्छ । एमाले-माओवादी एकता कायम हुन नसकेपछि पुःन ब्युँतिएकका एमाले र माओवादीभित्र अहिले केही अनौठा दृश्य देखिएका छन् ।
दृश्य एकः पार्टीलाई गुट भन्ने !
नेकपा(एमाले)मा अहिले पार्टी अध्यक्ष के पी शर्मा ओलीको सबैतिर अत्यधिक बहुमत छ । पार्टीको केन्द्रिय कमिटीदेखि सबै मातहत कमिटीमा अध्यक्षको बहुमत छ । संघीय संसदीय दल, प्रदेश संसदीय दल र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको अत्यधिक बहुमत पार्टी अध्यक्ष के पी शर्मा ओलीकै पक्षमा छ । सबै जनसंगठनको अत्यधिक बहुमत पार्टी अध्यक्ष र महासचिवकै पक्षमा छ । पार्टी एकता भंग हुँदा माओवादी तर्फबाट ठूलो संख्यामा एमाले भएका नेता पनि ओलीकै पक्षमा भएपछि त के चाहियो ? अर्कातिर नवौं महाधिवेशनमा अल्पमतमा परेर पराजित भएका, परार्टीको मूल नेतृत्वलाई सिध्याउने प्रचण्डको डिजाईनमा फसेर नेता कार्यकर्ताको ठूलो पङ्क्तिको समर्थन गुमाएका हाल निलम्बित नेता माधव नेपालको पक्षमा एउटा सानो समूह बाँकी छ । नेकपा(एमाले)भित्रको यो नै अहिलेको गुट हो ।
वृहत् नेपाली शब्दकोशले ‘कुनै खास उदेश्य लिएर केही व्यक्तिको पक्ष,मत वा स्वार्थका आधारमा बनेको सानो दल वा जमात,पारस्परिक मतभेद वा रागद्वेषका कारणले कुनै ठूलो सङ्गठन वा समूहभित्र तयार भएको सानो सङ्गठन’ भनेर व्याख्या गरेको छ । अनि पार्टी अध्यक्ष र महासचिवले वैधानिक तवरले बोलाएको पार्टीको बैठक कसरी गुट भेला हुन्छ ? एमालेका केही असन्तुष्ट नेताले आयोजना गरेको भेलालाई ‘राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला’ लेख्न र भन्न नहिच्किचाउने तर पार्टीको वैधानिक बैठकलाई ‘गुट भेला’ भन्नु अराजकताको पराकाष्टा नै हो । विगतमा जनवादी केन्द्रियताको ठूल्ठूला गुड्डी हाँक्ने नेताहरु नै पार्टी निर्णय मान्नुको सट्टा ‘गुटको निर्णय नमान्ने’ अनौठो तर्क गर्दैछन् । अझ १५ बर्ष पार्टी महासचिव भएको व्यक्तिले नै यस्तो तर्क गरेपछि कसको के लाग्छ ? ती नेताहरुका आन्दोलन, पार्टी र नेतृत्वबारेको विगतको बुझाई सबै भाँडमा गएको हो ?
दृश्य दुईः व्यक्तिलाई पार्टी र आन्दोलन देख्ने !
सबैलाई जानकारी छ, एमालेमा केही नेताहरु पार्टी नेतृत्वसंग असन्तुष्ट छन् । पार्टी नेतृत्वविरुद्ध गुटबन्दी गर्दागर्दै पेरिस डाँडामा आफ्नो नेम प्लेट राखिसकेका नेताहरू पुःन एमालेमा फर्कन ‘वाध्य’ नेताहरुको मन अमिलो भएको छ अहिले । ‘एमालेमै फर्किएर ओलीलाई सिध्याउने’ हुँकार गरेका नेताहरु एमाले आफूले भनेबमोजिम नचलेकोले कम्युनिष्ट आन्दोलन विसर्जनको दिशामा गएको, एमाले विभाजन हुन लागेको जस्ता हावादारी धारणा अगाडि सारिरहेका छन् । यस्तो लाग्छ, उनीहरू मात्र एमाले हुन्, उनीहरू नै कम्युनिष्ट आन्दोलन हुन् ! उनीहरूले भनेजस्तो नहुँदा कम्युनिष्ट आन्दोलन विसर्जन हुन्छ, पतन हुन्छ,ध्वस्त हुन्छ ! योभन्दा विडम्वना अरु के हुनसक्छ ?
दृश्य तीनः आफू देशभक्त क्रान्तिकारी, अरु देशद्रोही दलाल !
पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले देशको मुहार फेर्ने काम गरिरहेको, विश्व मानचित्रमा नेपालको नयाँ वृहत् नक्सा पेश गरेको, नेपाली श्रमजीवी जनताको पक्षमा काम गरेको र देशलाई सार्वभौम,सबल र समृद्ध राष्ट्रको कोटीमा पुर्याउन गरिरहेको अथक प्रयास आज देशका सबै जनताले मुक्त कण्ठले प्रशंशा गरेका छन् । तर गुटमा रोईलो छ । कहिले ओली देशद्रोही हो भनेका छन्, कहिले ओलीले दलाल पूँजीवादको पक्षपोषण गरेको जस्ता आरोप लगाएका लगायै छन् । अराजक र पार्टीविरोधी गतिविधि गरेवापत पार्टी विधानबमोजिम गरिएको निलम्बनलाई ‘देशभक्तिपूर्ण आवाजलाई दबाउन खोजेको’ भन्ने हाँस्यास्पद तर्क गरेका छन् ।
दृश्य चारः कम्युनिष्ट पार्टी बनाउन अदालत धाउने !
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका स्वनामधन्य नायक प्रचण्ड आजभोलि पार्टी बनाउन अदालत धाउन थालेका छन् । खासमा पार्टी बनाउन जनतामा धाउनु पर्ने हो । जनतालाई सन्तुष्ट पारेर उनीहरुलाई संगठित गर्नु पर्ने हो । तर उनले जीवनभर जनतालाई दुःख दिएको हुनाले, धेरै निर्दोष जनताको ज्यान लिने र हुर्मत लिने गरेको हुनाले, जनतालाई झुक्याएर सत्तामा पुग्न कोशिस गरेको हुनाले, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट सरकारलाई गिराउन प्रतिक्रियावादी साँठगाँठ गरेको हुनाले,विचारको राजनीति गर्नुको सट्टा चटके राजनीति गरेको हुनाले र एकीकृत भईसकेको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई क्षत विक्षत बनाउन भिलेनी भूमिका खेलेको हुनाले जनतामा जाने उनमा नैतिक तागत छैन ।
दश बर्षसम्म जङ्गलमा बमबारुदको खेती गर्दा पनि पार्टी बनेन, जनतामा गएर झुट्टा आश्वासन बाँड्दा पनि पार्टी बनेन । युद्ध लड्दा पनि पार्टी बनेन, चुनाब लड्दा पनि पार्टी बनेन । अब अदालतले पार्टी बनाई दिन्छ कि भन्ने मृगमरीचिकामा छन् उनी ! युजे पोत्तरको अन्तराष्ट्रिय गीत गाउनेहरू नै ‘क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी’ बनाउन अदालत धाउन थालेपछि पेट मिचीमिची हाँस्नु बाहेक केही विकल्प बाँकी रहदैन । कम्युनिष्टहरु समाजिक चेतनाको हिसाबले सबभन्दा उच्च मानिस हुन् भनिन्छ । कम्युनिष्टहरुलाई यसो गर्न अलि शरम हुनु पर्ने हो ।
तर यतिचाहिँ ढुक्कले भन्न सकिन्छ,नेपाली जनताले कुनैबेला आदर्श हिरो मानेका तर आज जिरोमा झर्दै गरेका कम्युनिष्ट आन्दोलनका यी केही नेताहरुले देखाईरहेको प्रहसनको पर्दाचाहिँ चाडै झर्नेवाला छ ।
र, यो प्रहसनबाट नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन झुक्किदैन, जनता अलमलमा पर्दैनन् । नेपाल र नेपालीको समृद्धिलाई पनि यसले कुनै असर गर्दैन ।
परदेशमा तन, स्वदेशमा मन
प्रचण्डको ‘ज्यान’ जोगाउन ज्वालाहरूको ‘आत्महत्या’
नियात्रा : सम्झनामा बेलायती पानीजहाज- क्रुज ब्रिटानिय
ब्लग : माधव नेपाल र भीम रावल नरहँदा पनि कम्युनिष्ट आन्दोलन जीवित रहन्छ
कोरोना संक्रमण तीव्र बनेपछि काठमाडौँमा सवारी साधनमा नयाँ नियम लागू
वडा अध्यक्षद्वारा लेखापालमाथि हातपात
भारतबाट फर्किएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह दम्पतीलाई नै कोरोना संक्रमण पुष्टि
अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेहरु तीन घण्टामै कसरी बने मन्त्री ?
गीतकार उपाध्यायले बनाए गीत संगीतको ५१ वटा विधामा विश्व रेकर्ड
बालुवाटारमा प्राणप्रतिष्ठा गरेर अयोध्यापुरी पठाइयो राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानका मूर्ति
सांसद पद नै नरहनेगरी एमालेले थाल्यो यी सांसदहरुमाथि कारबाही प्रक्रिया (सूचीसहित)
यातायात मन्त्री नेम्बाङसँग महासंघ प्रतिनिधिको भेट, काठमाडौँ घोषणा पत्रबारे जानकारी
अवरुद्ध हुँदै आएको वागमती प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन अन्त्य
धुलिखेल र बनेपाको शैक्षिक संस्था बन्द
रियलमीद्धारा फाइभ जी विकासका लागि पछिल्लो प्रतिवद्धता घोषणा
ओपोद्वारा नेपालमा ३३वाट फ्ल्याशचार्ज सुसज्जित एफ१९ को बिक्री आरम्भ
अभिनेत्री केकी अधिकारीलाई कोरोना संक्रमण